wasiirka waxbarashada XFS ayaa la kulmay Safiirka Dowladda Suudaan u fadhiya Soomaaliya – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
wasiirka waxbarashada XFS ayaa la kulmay Safiirka Dowladda Suudaan u fadhiya Soomaaliya
Wasiirka Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya Cabadullaahi Goodax Bare ayaa maanta ku soo dhaweeyay Xafiiskiisa Safiirka Cusub ee dawladda Suudaan u fadhiya Soomaaliya Khalafalaah Mustafa Baabikir, waxa ay kawada hadleen xiiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeyo alabada dal.
Safiirka Dowladda Suudaan ayaa soo dhaweyay horumarka ay Wasaaraddu ka samaysay dhanka horumarinta manaahijta iyo Imtixaanaadka iyo guud ahaan waxbarashada dalka.
‘’waxaan soo dhaweynaa horumarka Dowladda Soomaaliya ay ka gaartay dhanka waxbarashada Dowladda Suudaan waxa ay diyaar u tahay markasta in ay caawiso ardayda Soomaaliyeed iyo in aan kordhino Deeqaha waxbaraso oo ay helaan ardayda Soomaaliyeed,sidaasi waxaa yiri Safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya sudaan Khalafalaah Mustafa Baabikir.
Wasiirka waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Goodax Bare ayaa bogaadiyay Xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeyo Suudaan iyo Soomaaliya.
‘’ Waxaan manata xafiiskeeyga ku soo dhaweyay Safiirka Cusub ee Dowladda Suudaan u fadhiya Soomaaliya Khalafalaah Mustafa Baabikir,waxaan kawada hadalnay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ayadoo aan ognahay in ku dhawaad 7000 oo arday Soomaaliyeed ay wax ku bartaan dalka Suudaan iyo sidii Ardayda Soomaaliyeed ee sanadkaan Suudaan Waxbarashada ka helay loogu fududeyn lahaa hawlahooda.
Safiirka Dowladda Suudaan waxa uu soo dhaweeyay horumarka ay Wasaaradda Waxbarashada ay ka sameysay manaahiijta iyo Imtixaanadka iyo guud ahaanba Waxbarashada dalka,
Waxa kale oo aan kawada hadalnay in dib loo soo celiyo xiriirka dhanka Hiddaha iyo dhaqanka si fanaaniinta suudaaniyiinta ah ay u yimaadaan Soomaaliya sidii beri samaadkii oo kale.
Ka Wasaarad ahaan Waxaa naga go,an in ardayda Soomaaliyeed ay gaaraan hamigooda ah in ay Waxbartaan.